SAMSUNG က ML 1660 ဘို့ကားမောင်းသူ DOWNLOAD - မောင်းသူ - 2019
Samsung က ML 1660 ပရင်တာများအတွက်ယာဉ်မောင်း Download လုပ်ပြီး install
တစ်ဦးကို PC နဲ့ချိတ်ဆက်မဆိုဟင်းချို, အထူးထိန်းချုပ်ရေးအစီအစဉ်များ၏ system ပေါ်တွင်ရရှိနိုင်ပါသည်ဖြစ်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ ဤဆောင်းပါးဖြင့် Samsung ML 1660 မော်ဒယ်များအတွက် software ကို install လုပ်ဖို့ညွှန်ကြားချက်တစ်ခုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာဖို့မြှုပ်နှံပါလိမ့်မည်။
Samsung က ML 1660 များအတွက် software ကို Install
နည်းလမ်းများစွာအတွက်အလိုရှိသောရလဒ်ရယူပါ။ ကျွန်တော်တို့ကိုများအတွက်အဓိကတာဝန်အင်တာနက်ပေါ်ရှိအလိုရှိသောဖိုင်တွေရှာဖွေဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကထောက်ခံမှု site ပေါ်တွင်သို့မဟုတ်ကားမောင်းသူနောက်ဆုံးသတင်းများများအတွက်အစီအစဉ်များများထဲမှ အသုံးပြု. ကိုယ်တိုင်လုပ်ဆောင်နိုင်တယ်။ သင်ကသင့်ကိုယ်သင်လုပ်ဖို့မလိုချင်ကြပါလျှင်တူညီသောဆော့ဖ်ဝဲ, packages များ၏ installation အတွက်ကူညီပေးနိုင်ပါသည်။ တစ်ဦးအပြည့်အဝကို manual option ကိုလည်းရှိပါသည်။
Method ကို 1: ကျဘျဆိုကျဖောက်သည်ပံ့ပိုးမှု
ထုတ်လုပ်သူကျွန်တော်တို့ရဲ့ကုမ္ပဏီ Samsung က devaysa ဖြစ်ပါတယ်ဆိုတဲ့အချက်ကိုနေသော်လည်းအားလုံးလိုအပ်သောအချက်အလက်များနှင့်စာရွက်စာတမ်းများယခု Hewlett-Packard site ၏စာမကျြနှာမှာ "မုသား" ဖြစ်ပါသည်။ ဤသည်တို့ကြောင့် 2017 အားလုံးညာဘက်ဖောက်သည်ထောက်ခံမှု၏ဆောင်းဦးရာသီအတွက် HP ကပြောင်းရွှေ့ပြီဆိုတဲ့အချက်ကိုရန်ဖြစ်ပါသည်။
အဆိုပါ Hewlett-Packard က်ဘ်ဆိုက်ပေါ်တွင်ထောက်ခံမှုအပိုင်း
သင်စာမျက်နှာပေါ်တွင်တစ်ဦးမောင်းသူကိုရွေးချယ်ခြင်းမပြုမီ, သင် parameters တွေကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ပီစီ operating system ပေါ်တွင်မှန်ကန်စွာသတ်မှတ်ထားကြောင်းသေချာအောင်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ ဒါကဗားရှင်းနှင့်စွမ်းဆောင်ရည်ကိုရည်ညွှန်းသည်။ သတင်းအချက်အလက်မှန်ကန်မဟုတ်ပါဘူးလျှင်, ပုံရိပ်မှာပြထားတဲ့လင့်ခ်ကိုကလစ်နှိပ်ပါ။
အဲဒီမှာနှစ်ဦးကို drop-down စာရင်းကိုဖြစ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့စနစ်သက်ဆိုင်ရာရသောပစ္စည်းများကို select, ပြီးတော့သင့်ရဲ့ရွေးချယ်မှုကိုအတည်ပြုပါလိမ့်မယ် "ပြောင်းလဲခြင်း".
အဆိုပါစာရင်းကိုဖိုင်တွေကိုအများအပြားပစ္စည်းများသို့မဟုတ်အမျိုးအစားများရှိရေးနိုင်ပါတယ်။ သူတို့ထဲကနှစ်ဦးကို - OS ကို windose နှင့်အထူးသဖြင့်စနစ်အထူးဖိုင်တွေများအတွက် universal ဆော့ဖ်ဝဲ။
ဒေါင်းအထုပ်ကိုဖွင့်ခြင်းနှင့်တပ်ဆင်ခြင်းနှင့်အတူကို item များ၏ရှေ့မှောက်၌ switch သည်ထားတော်မူ၏။
ကျနော်တို့လိုင်စင်သဘောတူညီချက်၏စည်းကမ်းချက်များဖို့သဘောတူ checkbox ကိုအတွက်စစ်ဆေးမှုများ ထား. , လာမယ့်ခြေလှမ်းသွားရောက်လည်ပတ်မည်။
နောက်ထပ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အခြေအနေပေါ်မူတည်ပြီးကျနော်တို့ကိုတပ်ဆင်ရန် option ကိုရွေးပါ - အသစ်သို့မဟုတ်ပရင်တာ, ဒါမှမဟုတ်ပုံမှန် software ကိုတပ်ဆင်ခြင်း။
အသစ်က device ကိုလိုလျှင်, လာမယ့် screen ပေါ်မှာအောက်ပါနည်းလမ်းတွေထဲကတစ်ခုရွေးပါ။
သငျသညျလိုလျှင်လည်းကွန်ရက် settings ကိုစစ်ဆေးပါ။
လာမယ့်ခြေလှမ်းအတွက်ကျွန်ုပ်တို့သည်ကို manual setting ကို ip address ကိုလိုအပ်ပါတယ်ရှိမရှိဆုံးဖြတ်ရန်နှင့်ကိုကလစ်နှိပ်ပါ "Next ကို".
အဆိုပါအစီအစဉ်ကိုချိတ်ဆက်ပရင်တာကိုရှာပါလိမ့်မယ်။ ကျနော်တို့ကတည်ဆဲ device များအတွက်ဆော့ဖ်ဝဲ update ကိုရွေးကောက်သဖြင့်, ကွန်ယက်ကို configure မည်မဟုတ်ခဲ့လျှင်, ဒီဝင်းဒိုးကိုပထမဦးဆုံးဖွင့်လှစ်ပါလိမ့်မယ်။
အဆိုပါထောက်လှမ်း device ကိုသည်အထိစောင့်ဆိုင်းပါကအပေါ်ကိုကလစ်နှိပ်ပါ, ခလုတ်ကိုကလစ်နှိပ်ပါ "Next ကို"ပြီးတော့ installation လုပ်ငန်းစဉ်ကိုစတင်သည်။
တပ်ဆင်၏တတိယဗားရှင်းအမြန်ဆုံးနဲ့အလွယ်ကူဆုံးဖြစ်ပါတယ်။ ကျနော်တို့သာအပိုဆောင်းလုပ်ဆောင်ချက်များကို select လုပ်ပါနှင့်စစ်ဆင်ရေးစတင်ဖို့အတွက်လိုအပ်ပါတယ်။
တစ်ဦးချင်းစီ packets တွေကို
ဒါကြောင့်ကွန်နက်ရှင်နည်းလမ်းများနှင့်အရှုပ်ထွေး settings ကို၏ရွေးချယ်မှုမလိုအပ်ပါဘူးကတည်းကဤရွေ့ကားဒရိုင်ဘာ, အများကြီးပိုလွယ် installed နေကြသည်။
Installer ကိုစတင်ပြီးနောက် packet ကို decompress ဖို့နေရာရွေးဖို့ကိုသင်ပြ။ ဖိုင်တွေကိုအတော်လေးအနည်းငယ်ရှိပါတယ်ကြောင့်သီးခြားဖိုင်တွဲကိုဖန်တီးရန် သာ. ကောင်း၏။ ဒါဟာအစချက်ချင်းဖြည်ပြီးနောက် installation ကို start လုပ်ဖို့ check ထားတော်မူ၏။
စာနယ်ဇင်းများ "ယခု Install".
ကျနော်တို့လိုင်စင်သဘောတူညီချက်ဖတ်ပါနှင့်စခရင်ပုံမှာပြထားတဲ့အတိုင်းတစ် checkbox ကိုအားမရသဖြင့်၎င်း၏စည်းကမ်းသတ်မှတ်ချက်များကိုလက်ခံပါ။
လာမယ့်ပြတင်းပေါက်တှငျကြှနျုပျတို့ပရင်တာများအသုံးပြုမှုနှင့် ပတ်သက်. ကုမ္ပဏီမှဒေတာများပို့ပေးရန်တင်ပြသည်။ သင့်လျော်သော option ကိုနှင့်စာနယ်ဇင်းကို Select လုပ်ပါ "Next ကို".
ပရင်တာတစ်ဦးကို PC နဲ့ချိတ်ဆက်လျှင်, ထိုစာရင်းကနေ select လုပ်ပါနှင့် (ယေဘုယျကားမောင်းသူအကြောင်းကို။ P.4အပိုဒ်ကိုကြည့်ပါ) တပ်ဆင်ရန်ဆက်လက်ဆောင်ရွက်နိုင်သည်။ ဒီလိုမှမဟုတ်ရင်ဘေးကကို item မှ 'check box' set သငျသညျကိုသာကားမောင်းသူဖိုင်တွေ install လုပ်ခွင့်ပြုနှင့်ကိုကလစ်နှိပ်ပါ "Next ကို".
အရာအားလုံးကားမောင်းသူ installed သည်အဆင်သင့်ဖြစ်ပါတယ်။
Method ကို 2: အထူးအစီအစဉ်များ
ယနေ့ရသောစစ်ဆင်ရေး, မလက်ဖြင့်, ဒါပေမယ့်အလိုအလျောက်စနစ်ရှိပြီးသားပစ္စည်းတွေများအတွက်ယာဉ်မောင်းများအတွက်ရှာဖွေဒီဇိုင်းဆော့ဖ်ဝဲအကူအညီဖြင့်လုပ်ဆောင်နိုင်တယ်။ ကျနော်တို့ကအထိရောက်ဆုံး tool ကိုသည်အတိုင်း, DriverPack Solution မှအာရုံစိုက်ဖို့အကြံပြုသည်။
ဆော့ဖ်ဝဲ၏လုပ်ငန်းလည်ပတ်နိယာမစနစ်နှင့်ရလဒ်များ၏ပို့ဆောင်မှုများပေါ်တွင် install ယာဉ်မောင်းများ၏ဆက်စပ်မှုကိုစမ်းသပ်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်, ထို့နောက်အသုံးပြုသူကိုသင် download လုပ်ပြီး install လုပ်ဖို့လိုအပ်ပါတယ် packages အဘယ်အရာကိုဆုံးဖြတ်သည်။
Read more: DriverPack Solution ကိုအသုံးပြုပြီးကွန်ပျူတာပေါ်တွင်ယာဉ်မောင်းကို update လုပ်နည်း
အဆိုပါအမှတ်အသား (ID) အတွက်လက်အောက်တွင်ကျနော်တို့စနစ်ချိတ်ဆက်ထားသောအသီးအသီး device ကိုရှိတယ်လို့အထူးကုဒ်နားလည်ပါတယ်။ ဤရွေ့ကားတွေ့ရှိချက်များသည်ပြိုင်စံရှား, ဒါကြောင့်သူတို့က device များအတွက်ယာဉ်မောင်းအမည်ဖြင့်နှိမ့်ချကိုခြေရာခံရန်အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့အမှုတှငျကြှနျုပျတို့ဤကဲ့သို့သော ID ကိုဖွင့်ရှိသည်:
ဒီကုဒ်အပေါ်တစ်ဦးအထုပ်သာ DevID DriverPack အရင်းအမြစ်ပါလိမ့်မယ်ကိုရှာပါ။
Read more: device ကို ID ကိုအပေါ်တစ်ဦးမောင်းသူကိုရှာဖွေဖို့ကိုဘယ်လို
Method ကို 4: Tools များ OS ကို windose
မဆိုဗားရှင်း windose ပရင်တာအပါအဝင်အမျိုးမျိုးသော devices များများအတွက်ယာဉ်မောင်းတစ်ဦးစံသတ်မှတ်ချက်နှင့်အတူတပ်ဆင်ထားပြီးဖြစ်ပါတယ်။ သူတို့ကိုသုံးစွဲဖို့, သင်သင့်လျော်သောစနစ်က partition ကို activate လုပ်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။
Windows 10 ကို, 8, 7
ကျနော်တို့ menu ကိုသုံးပြီးအရံထိန်းချုပ်ယူနစ်သို့သွား "Run ကို"သော့ပေါင်းစပ်ကြောင့်ဖြစ်ရတဲ့ Windows ကို + R ကို။ အသင်း:
သငျသညျအောက်ကပုံတွင်ပေးထားသောလင့်ခ်ပေါ်မှာ "ထိပ်တန်းတစ်ဆယ်" သို့မဟုတ် "ရှစ်" လာမယ့်ခြေလှမ်းကလစ်သုံးလျှင်။
ဤတွင်ကျနော်တို့ကဒေသခံတစ်ဦးပရင်တာ၏ installation နှင့်အတူမူကွဲများနှင့်ကိုယ်တိုင်သတ်မှတ် parameters တွေကိုရွေးပါ။
ထို့နောက်စက်ပစ္စည်းအတွက်ဆိပ်ကမ်း (ချိတ်ဆက်မှုအမျိုးအစား) ကို configure ။
ကျနော်တို့လက်ဝဲ pane ထဲကအတွင်းရောင်းချသူ (Samsung က) ၏နာမကိုအမှီရှာတွေ့, လက်ျာမော်ဒယ်ကိုရွေးချယ်ပါ။
ပရင်တာ၏နာမကိုဆုံးဖြတ်ပေးပါတယ်။ ရှည်လွန်းမဟုတ်ခဲ့သောအဓိကအရာ။ အဆိုပါအရံအစီအစဉ်ကိုပူဇော်ပါလိမ့်မယ်ကြောင်းကိုမျှဧကန်အမှန်ရှိ၏ပါ။
ကျနော်တို့ installation ကိုပြီးအောင်လုပ်ပါ။
Windows XP ကို
အရံပစ္စည်းနှင့်အတူ interface ကိုရယူပါသစ်ကို operating system ကိုအတွက်နည်းတူကောင်းစွာကဲ့သို့ဖြစ်ရနိုင်သည် - မျဉ်းနှင့်အတူ "Run ကို".
စတင်မျက်နှာပြင် "ဒီမာစတာ" သင်သည်တစုံတခုကိုလုပ်ဖို့မလိုအပ်ပါဘူး, ဒါကြောင့်ကိုယ့်ခလုတ်ကိုတွန်း "Next ကို".
program ကိုပရင်တာရှာဖွေနေမစတင်ထားဘူးဆိုတာသေချာဖို့, သက်ဆိုင်ရာ checkbox ကိုဖယ်ရှားခြင်းနှင့်လာမည့်ခြေလှမ်းသွားရောက်လည်ပတ်မည်။
လက်ဝဲ pane ထဲကကို Samsung ကရွေးချယ်ပြီးနှင့်မော်ဒယ်နာမအဘို့ရှာနေညာဘက်အပေါ်။
ကျနော်တို့က default name ကိုစွန့်ခွာသို့မဟုတ်၎င်းတို့၏ကိုယ်ပိုင်ရေးပါ။
switch ခွင့်ပြုရန်ရှိမရှိရွေးချယ် "အရှင်ဘုရား" စမ်းသပ်ပုံနှိပ်ပါစေ။
ဤရွေ့ကားသင်အရာရှိတစ်ဦးရဲ့ site သွားရောက်ကြည့်ရှုဖို့ option ကိုရှေးခယျြထို့နောက် "ဟုအဆိုပါသွေးခုန်နှုန်းခံစားရတယ်" ဖို့နဲ့ကအားလုံးကိုကိုယ့်ကိုကိုယ်လုပ်ဖို့လိုပါလျှင်သင့်ရဲ့ပရင်တာကို Samsung ML 1660. များအတွက်ယာဉ်မောင်းကို install လုပ်ဖို့လေးနည်းလမ်းများဖြစ်ကြသည်။ အသုံးပြုသူ၏လိုအပ်သောနိမ့်ဆုံးရှိနေခြင်းလျှင်, အထူးဆော့ဖ်ဝဲကိုအာရုံစိုက်။